Wasiirka Arrimaha Dibada Somalia oo xerada Xalane kula kulmay Safiirada dalalka… – Hagaag.com
Wasiirka Arrimaha Dibada Somalia oo xerada Xalane kula kulmay Safiirada dalalka…
Posted on 6 Luulyo 2019 by Admin in National // 0 Comments
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa kulan ay Albabada u xiran yihiin waxa uu xerada Xalane kula lahaa Safiirada dalalka Caalamka u fadhiya magaalada Muqdisho, isagoo kala hadlaya xaaladaha soo kordhay.
Sida wararku sheegayaan, kulanka oo ahaa mid aan caadi aheyn, waxaa xaadir ku ah inta badan dalalka Safiirada ku leh wadankan, iyadoo Wadamada aan Safaaradaha ku leheynna ay shirka uga qeyb galayaan Qunsulka Safaarada.
Marka uu shirka uu soo dhamaaday ayaa Wasiirka arrimaha dibadad Soomaaliya saxaafada u sharaxay waxyaabihii kasoo baxay kulanka uu la qaatay qaar kamid ah Safiirada wadamada Caalamka u jooga Soomaaliya.
Wasiir Cawad ayaa sheegay in dowadda Soomaaliya ay Somaliland u aaminsan tahay in ay ka mid ah tahay dhulka Soomaaliya, ayna jiri karin dowlad u sameyn karta Maqaamka dowladeed ee Soomaaliya oo kale.
Mr Cawad ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan dowladu shisheeye oo ka shaqeynaya hagar daamo kuna xad gudbaya midnimada Soomaaliya, waxa uuna dowladahaasi uga digay in ay ka waantoobaan ficilada ay ku dhaqaaqayaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii waxa ay xiriirka u jartay Jamhuuriyadda Guinea ee dhacda Galbeedka Qaarada Afrika, taasoo si hab maamuuskeeda sareeya ay u soo dhaweysay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi.